araka ny hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, ny 13 mey farany teo. Nohamafisin’ny Mgr Ludovic Rabenatoandro izany mahakasika ny fahitany ny tsy fandriampahalemana. “Aleonay mifanena amin’ny dahalo toy izay mifanena amin’ny mpitandro filaminana, hoy ny olom-pirenena”. Raha ny voalazan’ny Vikera Jeneralin’ny Diosezy Antananarivo. Nampita ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena, omaly eo amin’ny Toby Ratsimandrava fa zandary iray G1C na Tsipika telo izay miasa ao Beravina, no notorian'ny ray aman-drenin'ny zazavavy iray 15 taona izay nalain'ilay zandary an-keriny tao an-tranon'ny ray aman-dreniny hiaraka aminy noho ny hamamoany ny tapaky ny volana febroary teo.” Saonjo iray lohasaha tsy ilaozan’izay hamarano. Zandary iray hafa koa no tafiditra am-ponja vonjimaika tao Maintirano ny 26 febroary teo noho ny fitoriana azy ireo vokatry ny herisetra tany amin'ny kaominina Bemarivo Ambatomainty sy Beravina Morafenobe. Ny CP na chef de poste avancé Bemarivo moa (gp1c na adjudant) dia notorian'ny vehivavy iray voatazona tao amin'io PA io noho ny raharaha nahakasika azy. Miezaka manadio fatratra ny ao anatiny ny zandary . Maro moa ny olona no niresaka ny hoe ho hitantsika eo fa havotsotry ny zandary io fa tsy ho tonga any amin'ny fitsarana rehefa nahita fa natao garde à vue izy roalahy ny 22 febroary 2019 teo, tao Maintirano. Natolotra ny fampanoavana anefa izy ireo taorian'ny fanadihadiana ka miandry ny fitsarana azy ireo any am-ponja. Mitohy ary tsy miato ny fanadiovana eo anivon'ny ZP art manara-maso akaiky izany ny mpifehy sy mpitantana.” Araka ny fampitam-baovao ofisialy avy eny amin’ny Toby. Miampy ireo 336 voarohihirohy tamin’ny kolikoly sy ny fanafihana ary ireo 24 efa naiditra am-ponja vonjimaika volaza tamin’ny tapa-bolana, miezaka manadio ny zandary fa very fanahy koa ny olom-pirenena. Ny hitsikitsika natao andriamanitra ivavahana indray mantsy nipaoka ireo zanak’akoho kely.